Ninja Dude vs Zombies 2 waa iska caadi xitaa PVP | Androidsis
Ninja Dude vs Zombies 2 waa dhacdo kale oo cusub oo loogu talagalay Android taasi waxay isku daydaa inay ku qabato si aadan u joojin dheelistaada muddo dheer. Qof iska caadi ah oo leh ujeedo wanaagsan, in kasta oo mar uun ay kugu abuuri karto shaki sababtoo ah ma garanaysid waxa dhab ahaan la sameeyo.
Ma weydo hagaajin, seefo cusub, hargahood iyo jilayaashaas taxanaha ah kaas oo ballaadhiya waxa ku jira si ay u sii ciyaaraan maalmo badan. U diyaargarow inaad noqoto ninja oo markaa sidaas ku tirtir kuwa madaxda ah ee kama dambaysta ah ee aan laga adkaan karin oo aad u adag in la tirtiro sababtuna tahay suurtogalnimada in la waxyeeleeyo.
1 A munaarado iyo ninjas
2 Ka tirtir dhammaan zombies -ka Ninja Dude vs Zombies 2
3 Furo 4 ninjas
A munaarado iyo ninjas
Ninja Dude vs Zombies 2 waxaan ku noqonaa ninja dhab ah oo wuxuu ku xayiran yahay munaarad ay kumanaan zombies ah rabaan inay fuulaan oo fuulaan. Ujeeddadaadu waxay noqon doontaa inaad tirtirto si aad uga hortagto inay kor u fuulaan oo sidaas ku tirtiraan, sidaa darteed dhammaan xiisadda ayaa joogi doonta si ay u caawiso ninja geesiga ah ee aan si fudud ku heli doonin.
Si looga takhaluso dhammaan kuwa zombiesyada dhiigyacabka ah, ninjaheenna waxaad gacantaada ku haysan doontaa ikhtiyaarka isticmaalka shurikens kaas oo lagu difaacayo. Hub tuur ah oo kuu oggolaanaya inaad toogato dhammaan zombiesyadaas oo si xirfad leh u fuulaya munaaradda. Ciyaarta ciyaarta waxay si fudud ugu saleysan tahay gujinta hal ama dhinaca kale ee shaashadda si loo bilaabo shurikens -yada ay tahay inay baabi'iyaan zombies -ka.
Laakiin arrimuhu ma sahlanaan doonaan, maaddaama loo malaynayo inay tahay inaan sugno qaar ka mid ah dabinnadayada si loo hawlgeliyo sidaas darteedna waxaan u tirtiri karnaa zombies -ka. Waa halkaan shakiga iyo u dhawaansho la’aanta ayaa soo gala in si dhab ah loo muujiyo waxa aan u hayno oo inaga soo horjeeda.
Ka tirtir dhammaan zombies -ka Ninja Dude vs Zombies 2
Isla waxay dhacdaa marka ay muuqato tababaraheena ugu dambeeya. Waxaan arki doonaa isaga oo fuulaya oo fuulaya isaga oo aan waxba qaban karin. Waxaa suurtogal ah inay tahay cillad aan aragnay, maadaama dhowr jeer aynaan fursad u helin inaan karno si aan u baabi'inno. Ceeb maxaa yeelay Ninja Dude vs Zombies 2 ayaa ballanqaaday, marka maadaama aan ku jirno maalmihiisii ​​ugu horreeyay ee bilawga, waxaan rajeyneynaa inay dhowaan hagaajin doonaan khaladaadka noocaan ah.
In Ninja Dude vs Zombies 2 Qaabka PvP sidoo kale ma maqan yahay, inkasta oo aanaan awoodin inaan cadayno. Waxay ku saabsan tahay in lala tartamo ciyaartoy kale si ay ugu tartamaan inay noqdaan kuwa ugu fiican. Tani waxay ka dhigan tahay inaan heli karno abaalmarinno sidaasna aan u habeynno ninja -gayaga inuu noqdo mid gaar ah.
Sidoo kale ma yara dab -damiska, barafka shurikens, gaashaammada, iyo xirfadaha kale yaa garabkeena istaagi doona si aan u sii wadno horumarka ilaa heerarka. Taasi waxay tidhi, ma wajahayno ciyaar aan dhammaad lahayn, laakiin waxaan yeelan doonnaa xad cadow aan baabi'inno si aan ugu gudubno kan xiga.
Furo 4 ninjas
Waxyaabaha dheeraadka ah waa mid kale oo ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee Ninja Dude vs Zombies 2. Waan furi karnaa ilaa 4 ninjas oo ku habayso harag kala duwan iyo isku -darka oo aan furi doono. Isku -dhac xiiso leh oo aan u nisbeynno caddeyn la'aanta gargaarka aan annagu u hayno. Waxaan rajeyneynaa inay ku hagaajiyaan maamulaha ugu dambeeya, maadaama “adeerka” uu kor u kacayo oo aadan ka arki karin munaaradda ilaa uu iska tuuro qoortayada si uu ciyaarta u soo afjaro.
Farsamo ahaan waxay leedahay middaas oo aan iftiiminno naqshadda dabeecadda qurxoon, bay'adaha isbeddelaya iyo habaynta ay bixiso. Wax yar oo dheeri ah oo loogu talagalay si caadi ah oo si fiican loo fikiray oo wali leh waxoogaa shaqo ah oo la sameeyo si kor loogu qaado khibradda ciyaarta ee ay abuurto.
Un cinwaanka freemium ee loo yaqaan Ninja Dude vs Zombies 2 ee loogu talagalay Android oo ay tahay inaad kula tacaasho boqolaal zombies ah oo doonaya inay kaa tuuraan munaaraddaas oo ah tan ugu weyn ee aad leedahay iyo maalkaaga; Gaar ahaan inta aadan cagahaaga dhulka dhigi karin kana cararin weerarada noocan oo kale ah ee zombies kala duwan. Waxaad hore uga haysatay Google Play Store lacag la'aan qalabkaaga moobilka. Waan kaa tagaynaa oo leh waayihii weynaa ee Sharaftii Samurais.
Ninja Dude vs. Zombies 2
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Ninja Dude vs Zombies 2, waa ciyaar aan caadi aheyn oo aad ku calaamadeyso katana